प्रदेश समाचार – Sudarshan Khabar
सरकारमा बढ्दो किचलो, सरकारबाट बाहिरिने मुडमा माओवादी
कर्णाली सरकारमा बढ्दो किचलो, सरकारबाट बाहिरिने मुडमा माओवादी २०७८ माघ ८ शुदर्शन खबर सुर्खेत । सरकारमा सहभागी दलबीच कुरा नमिल्दा कर्णाली प्रदेशमा मन्त्रिमण्डल विस्तार अलमलमा परेको छ । नेकपा माओवादी केन्द्रले सरकार विस्तारका लागि ठूलो दलको हैसियतमा आफूले पहल गर्ने निर्णय गरेको चार दिन भइसक्दा दलहरुबीच कुरा नमिल्दा कुनै प्रगति भएको छैन । सत्ताघटक दलबीच […]
मधेश प्रदेश बनाउन १७ सांसदको ‘फ्लोर क्रस’ शुदर्शन खबर २०७८ माघ ३ जनकपुर । प्रदेश २ को नामाकरणका लागि प्रदेशसभामा भएको मतदानमा प्रमुख दलका सांसदहरूले नै फ्लोर क्रस गरेका छन् । जनता समाजवादी पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी र नेकपा माओवादी केन्द्र प्रदेश २ को नाम ‘मधेश’ कायम गर्न सहमत थिए । यद्यपि संविधानतः उनीहरूसँग प्रस्ताव […]
एमालेबाट बिद्रोह गरेका राजेन्द्र राई मुख्यमन्त्री बने भोलि शपथ
एमालेबाट बिद्रोह गरेका राजेन्द्र राई मुख्यमन्त्री बन्दै शुदर्शन खबर \_ कार्तिक १४ २०७८ काठमाडौं । प्रदेश १ को विपक्षी गठबन्धनले नेकपा एकीकृत समाजवादी संसदीय दलका नेता राजेन्द्र राईलाई मुख्यमन्त्री बनाउने निर्णय गरेको छ । यसअघि नेपाली काँग्रेसले मुख्यमन्त्रीमा आलोपालो हुनुपर्ने माग गरेपछि कात्तिक ७ गतेको लागि तय भएको हालका मुख्यमन्त्री भीम आचार्यको विश्वासको मतमाथिको मतदान […]
साह र कर्ण माओवादीबाट दुइ मन्त्री थपिय
साह र कर्ण माओवादीबाट दुइ मन्त्री थपिय धनुषा \_ नेकपा माओवादी केन्द्र प्रदेश नम्बर २ संसदीय दलले सरकारमा सहभागी हुने नेताको नाम तय गरेको छ । सो दलले माओवादी केन्द्रका तर्फबाट भरतप्रसाद साह र रुवी कर्णलाई सरकारमा पठाउने निर्णय गरेको हो । शुक्रबार बसेको संसदीय दलको बैठकले साहलाई मन्त्री र कर्ण राज्यमन्त्रीमा पठाउने निर्णय गरेको […]
मुख्यमन्त्री कप फुटबलमा आर्थिक अनियमितता नभएको लेखा समितिको ठहर
मुख्यमन्त्री कप फुटबलमा आर्थिक अनियमितता नभएको लेखा समितिको ठहर मोरङ – प्रदेश १ को सार्वजनिक लेखा समितिले दुई वर्ष लगाएर विवादास्पद बनेको मुख्यमन्त्री कप फुटबल प्रतियोगितासहित वार्षिक प्रतिवेदन सदनमा पेस गरेको छ। लेखा समितिका सभापति शिवनारायण गन्गाईले बिहीबार प्रदेश सभामा विवादास्पद बनेको प्रतियोगिताको विवरणसहित समितिको वार्षिक प्रतिवेदन सदनमा पेस गरेका हुन्। ०७६ साल असारमा सम्पन्न […]
पहिलो खोप डोज लगाएपनि वडाध्यक्षको कोरोना संक्रमणबाट मृ;त्यु ,के घट्दै छ खोपको गुणस्तर?
पहिलो खोप डोज लगाएपनि वडाध्यक्षको कोरोना संक्रमणबाट मृ;त्यु ,के घट्दै छ खोपको गुणस्तर? बुटवल\_ बुटवल उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १८ का अध्यक्ष हुमनाथ आचार्यको कोभिड–१९ का कारण आज निधन भएको छ । ७२ वर्षीय वडाध्यक्ष आचार्यको उपचारका क्रममा काठमाडौँमा आज बिहान निधन भएको उपमहानगरपालिका प्रवक्ता राम प्रसाद रेग्मीले जानकारी दिए । उनको सुरुमा बुटवलको कोरोना विषेश […]
लुम्बिनी सरकारकी मन्त्रीको राजिनामा संगै संकटमा सरकार ओली लाई अर्क्रो चुनौती
काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टी (जसपां)बाट लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा सहभागी राज्यमन्त्रीले राजीनामा दिनुभएको छ । भौतिक पूर्वाधार विकास राज्यमन्त्री सुमन शर्मा रायमाझीले पार्टीले सरकारको समर्थन फिर्ता लिइसकेको अवस्थामा राज्यमन्त्रीको पदमा बसिरहन उचित नठानेर राजीनामा दिएको राजीनामा पत्रमा उल्लेख छ । लुम्बिनी प्रदेशमा वैशाख ६ गते मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएपछि जसपाका ६ प्रदेससभा […]
कर्णाली प्रदेशका ३ जना मन्त्रीलाई राजीनामा दिन निर्देशन ! यो आमान्य छ : मन्त्रिहरु
सुदर्शन खबर ५ असार, सुर्खेत । एमाले कर्णाली प्रदेश संसदीय दलको बैठकले प्रदेश सरकारमा रहेका तीनजना मन्त्रीलाई तत्काल राजीनामा दिन निर्देशन दिएको छ । शुक्रबार बसेको संसदीय दलको बैठकले सरकारमा सहभागी एमाले सांसद अम्मरबहादुर थापा, कुर्मराज शाही र नन्दसिंह बुढालाई फिर्ता बाेलाउने निर्णय गरेको प्रमुख सचेतक गुलावजंग शाहले जानकारी दिए । गत वैशाख ३ गते […]
कर्णालीमा र’डाको: नीति तथा कार्यक्रम पारित भएन, बजेट के होला ?
सुर्खेत, १ असार । सुदर्शन खबर कर्णाली प्रदेशसभाको सोमबारको बैठकमा प्रदेश सरकारले सरकारको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि प्रस्तुत गरेको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्ने कार्यसूची थियो । आज असार १ गते नयाँ बजेट ल्याउनुपर्ने प्रदेश सरकारलाई संवैधानिक बाध्यता छ तर नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल सकिए पनि मुख्यमन्त्रीले जवाफ दिने र पारित गर्ने निर्धारित […]